Spring Break ity? | Martech Zone
Talata, Aprily 3, 2007 Talata, Oktobra 4, 2011 Douglas Karr
Amin'ity herinandro ity aho dia miala sasatra. Saika mahatonga ahy hihomehy miteny mafy izany. Toy izao no fandehanan'ny fialan-tsasiko hatreto:
Am-polony amin'ireo tranokalako (na tranokalan'ny mpanjifako) no havaozina ankehitriny. Ny tranokala dia hafindra any amin'ny mpizara vaovao haingana sy haingana miaraka amin'ny kinova farany an'ny rindrambaiko rehetra. Mazava ho azy fa izany dia mitarika mankany DNS olana (tranokala namako akaiky indrindra sy mpanjifako naterina tany amin'ny pejy spammer nandritra ny alina… ugh!), olan'ny fifandraisana amin'ny database, olana momba ny kinova, olan'ny lohahevitra, olan'ny plugin… ianao no manome anarana azy. Nifoha hatramin'ny 6 ora sy sasany maraina aho androany nanamboatra olana. Manana tranonkala iray sisa aho (eny, ilay iray ihany!).
Manana tranokala natomboko aho tamin'ity herinandro ity (satria tsy manam-potoana hafa aho) izay ao ambadiky ny fampandrosoana. Na izany aza, hatreto dia nandeha tsara. Izaho dia nametraka tahiry Geographic binary an'ny Adiresy IP avy amin'i Maxmind ary kaody an-tsoratra izay hametraka ny sarintany afovoany fiara mifototra amin'ny mpampiasa mitsidika. Ny kinova maimaimpoana an'ny API tsy dia marina loatra fa farafaharatsiny mitarika ilay olona mankany amin'ny faritra mety.
Nanomboka ny asa fananganana plugin ho an'ny WordPress hahatonga ny User Interface ho madio kokoa. Ny fiasa dia tsy miova, fa ny fijery sy ny fahatsapana dia mihatsara kokoa (jereo eto ambany). Nanontany an'i Sean aho Geek miaraka amin'ny Laptop hanampy ahy hivoaka. Tsy maninona aho amin'ny famolavolana WP sy ny olan'ny fizahan-tany, fa azoko antoka fa afaka mitondra an'ity trano ity i Sean.
Ary mazava ho azy, any an-trano ny zanako. Ny zanako lahy dia miomana amin'ny Prom ary handeha Indiana University. Ny zanako vavy dia ao anatin'ny “mode sipa” feno ka ny telefaona dia miantso tsy an-kijanona miaraka amin'ireo tanora mihazakazaka mivoaka toa an'i Grand Central Station. Saika hitsambikina avy eo am-baravarankely aho! Soa ihany fa ao amin'ny rihana faharoa aho.
Manampy an'ity fa te-hampiakatra ny fakan-kevitra aho (nihena kely isan-taona ny fidiram-bolako tamin'ny taon-dasa raha tsy nisy izany) ka feno antso sy sakafo atoandro ny herinandro.
Ahoana izany amin'ny fialantsasatra? Tsy andriko ny hiverina hiasa hiala sasatra! (Tsia!)
Toa ny fialan-tsasatro.
Ao an-trano ny zanako amin'ity herinandro ity koa. Fialan-tsasatra ho an'ny * ry zareo * fa tsy izaho na ny vadiko 🙂
Apr 3, 2007 ao amin'ny 8: PM PM
Hey Doug, manantena ny hiara-miasa aminao ao amin'ny plugin admin.
Nahavita plugins WP fanao am-polony ho an'ny olona aho fa tsy namoaka iray ho an'ny besinimaro mihitsy saingy hiova izany amin'ny andro ho avy raha vantany vao mandalo fitsapana maromaro hafa aho.
Raha ny fandaharam-potoananao… eh, mamela ny fotoana fialan-tsasatra 🙂 tiako raha aolanao ny kodiarana.
Apr 3, 2007 ao amin'ny 10: PM PM
Ny fanaovana ahy zavatra raha tokony mieritreritra ny vakansy aho! Ny ankizy no handroaka anao voa!
Apr 4, 2007 amin'ny 1: 17 AM
Tena liana amin'ny plugin WordPress nolazainao aho. Hafahafa fa ny zava-drehetra momba ny vatolampy WP afa-tsy ny mandefa interface! Ny olako amin'izany dia be loatra ny korontana, ary tsy azonao esorina ny korontana ary mifantoka amin'ny soratanao.